Waaheen Media Group » Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaaftu maxay ka damacday Diiwaankii Sekedda, muxuuse Siilaanyo masuuliyadaha kale u saarayaa?
Browse:Home Sports Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaaftu maxay ka damacday Diiwaankii Sekedda, muxuuse Siilaanyo masuuliyadaha kale u saarayaa?
Diiwaanka Sekedu waxa uu wax ka tari lahaa dagaalka xukuukmaddu kula jirto Aafada Tahriibka
Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa bilowgii xukuumaddiisa waxa uu hormadii ugu horaysay ee Xukuumaddii uu soo dhisay ku daray xafiiska Diiwaanka Sekedda oo uu wakhtigaas u magacaabay sheikh C/laahi Sheekh Cali Jawhar, hase yeeshee sheekhu wuu ka cudur daartay xilkaas.
Xilkaas Madaxweyne Siilaanyo cid kale umuu magacaabin muddo laba sano ku dhaw, hase yeeshee Digreeto uu muddo sii horaysay soo saaray ayuu ku hoos geeyay Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta Xafiiskaasi, isagoo Amray wasiirka in uu Masuul u magacaabo, isla markaana Xeer loo sameeyo.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu xafiiskan ugu talo galay in lagu qabto Sekedda Dadka Muslimiinta ah ee Reer Somaliland bixiyaan sanadkiiba mar, si loogu daryeelo Agoonta iyo Dadka jilicdsan oo Dalka aad ugu badan marka loo eego tirade Dadka wax haysta iyo kuwa Nolol maalmeedku ku adag yahay.
Mashruucaasi Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaaftu ilaa hada may dhaqaajin, lamina garanayo sababta Wasiirka Diinta iyo Aw-qaaftu ilaa hada u haysto jagadaas iyo Xeerkii lagu maamuli lahaa oo ay dadweynuhu baahi weyn u qabaan.
Waxa la guda galay bilihii Barakaysnaa ee Cibaadada ee Ummadaha Muslimiintu ugu deeqsisanaayeen ee loogu talogalay in uu Sanduuqani shaqeeyo, si loogu xereeyo sadaqaadka ay baxsanayaan dadka Ehlu khayrka ahi haddii ay tahay Seko ay bixiyaan oo ku waajibtay bilahan oo kale iyo haddii ay tahay sadaqo kale oo ay illaahay ugu dhawaanayaanba.
Sanduuqan ayaa haddii laga shaqaysiiyo oo loogu dhaqmo sidii ay Asaxaabtii ugu dhaqmi jirtay noqonaya mid daboola baahida kumanaan qoys oo aan dabka loo shidin, ama ah qaadaa ma dhargaan jeebkoodu aanu dabooli Karin baahidooda Nololeed, waxaanu ka furan lahaa in ay sugaan Mucaawimo dibadeed ama baryo ay gacmaha hoos hoorsadaan Bulshada, taasoo Diinta Islaamku kala dagaalanto Muslimiinta.
Sidoo kale Sanduuqani waxa uu wax weyn ka tari doonaa mashruuca la dagaalanka Tahriibka, isagoo lagu fulin kari lahaa dhaqaalaha ka soo baxa mashaariic yar yar oo ay ka faa’iidaysan lahaayeen da’ yarta Badda ku daadanaysa ee Madaxweyne Siilaanyo ka damqaday masuuliyadda ka saaran, isla markaana uu guddida uu u magacaabay wax ka qabashada arrintaas ku daray wasiirka Diinta iyo Aw-qaafta Sheekh Khaliil, isagoo sida la faaleeyay laga yaabo in uu dhinac wacyigelinta ugu daray, hase yeeshee aan ka eegin dhinaca Dhaqaalaha uu u xilsaaray ee aanu ka soo bixin xilkeeda.
Si kasta ha ahaatee Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta Somalailand waxa looga fadhiyaa ka hor bisha Ramadaan in ay hirgeliso Sanduuqan ama Madaxweyne Siilaanyo dib ugu celiso si loogu xil saaro cid kale oo hanan karta.
Filed in: Sports, Waaheen News